(5 votes, avg 3.00/5.00)
रंगीन दुनियाँका मलिन चेहरा
सन्तोष रिमाल, काठमाण्डौ, २०७१ माघ २५, आईतवार
घर, कार, बैंक ब्यालेन्स... विलासी जीवनशैली।
काम, नाम र दामले मालामाल करिअर।
‘नम्बर वान' को दौडमा झन्डै सबैलाई उछिनिसकेकी बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणसँग के थिएन? एक वर्षअघि फिल्म ‘ह्यापी न्यु इयर' को क्लाइमेक्स सुटिङ हुँदै गर्दा दिपिकाको सफलताले सगरमाथा चुम्दै थियो। तर, दुनियाँका आँखामा अति सफल, व्यस्त र निष्फिक्री यी सुन्दरी भित्रभित्रै जल्दै थिइन् र आफैंसँग पराजित अनुभूति साच्दै थिइन्। उनलाई किन यस्तो भइरहेको छ, बाहिरी दुनियाँले मात्र होइन, स्वयंलाई समेत कुनै भेउ थिएन।
दिपिकाका व्यवहार क्रमशः अनौठा हुँदै गएका थिए। बिहान उठ्नेबित्तिकै बिनाकारण रिस उठ्थ्यो उनलाई। काममा पटक्कै मन लाग्दैनथ्यो। मान्छेसँग बोल्नै नपरोस्जस्तो हुन्थ्यो। यो अवस्थाबारे उनले कसैलाई भनेकी थिइनन्। परिवारले त केही थाहा नपाओस् भन्ने नै चाहन्थिन्।
समस्या घट्ने होइन, झन्झन् बढिरहेको थियो। उनी यति हैरान भइन् कि अन्ततः यो पीडा कसैलाई नभनी धरै भएन। उनले एक आफन्तलाई यी सबै अनुभूति सुनाइन्। तिनै सहयोगीको सहाराले पत्ता लाग्यो– दिपिका त डरलाग्दो ‘डिप्रेसन' को सिकार भइसकिछन्, थाहै नपाई मनोरोगको आक्रमण पो सामना गर्दै रहिछन्।
उनले तुरुन्तै मनोविज्ञको परामर्श लिइन् र औषधि पनि। आफू दुरुस्त भएपछि दिपिकाले आफ्नो समस्या र उपचारकथा सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिन्। किनकि, उनलाई आँकलन थियो– यो रंगिन दुनियाँका थुप्रै अनुहार यस्तै समस्याले मलिन हुँदै गइरहेका छन्।
बलिउडकी मसलादार अभिनेत्रीको डरलाग्दो कथाले नेपाली अभिनेत्री रेखा थापालाई नराम्ररी झस्कायो। दिपिकाले डिप्रेसनका जुनजुन अनुभव र संकेत बाँडेकी थिइन्, रेखाले त्यसलाई आफ्ना थुपै्र सहकर्मीका अनुहारमा अनुभव गरिन्।
दिपिकालाई कुन अवस्थाले डिप्रेसनमा पुर्‍यायो होला? यस्तो सोच्दासोच्दै उनलाई ती सहकर्मीका सामुन्ने पुर्याइयो, जो केही समयअघि उनीसित पोखिएकी थिइन्। ठ्याक्कै दिपिकाकै जस्तो अनुभूति र त्यसपछाडिका भयावह पीडा बिसाएकी थिइन् ती अभिनेत्रीले रेखालाई, नजिककी सहयात्री सम्झेर। ती अभिनेत्रीले फिल्म क्षेत्रका सबैखाले शोषण सहेकी थिइन् जुन बजारु चर्चामा आइरहन्छन्। डिप्रेसनले सकिन लागेकी ती सहकर्मीको अवस्था, आँसु र बिलौनाका स्वरसहितको अनुहार रेखाका आँखामा निकैबेर घुमिरहे।
रेखा ती अभिनेत्रीको हालत सुनाउँदै गइन्–
‘साँच्चै हृदयविदारक थियो त्यतिबेला उनको अवस्था।'
तिनी रेखालाई आफ्नै ठानेर केही सुनाउन खोजिरहेकी थिइन्, तर ओठबाट शब्द खस्न सकिरहेका थिएनन्।
चुरोट सल्काइन्। लामो–लामो सर्को तानिरहिन्। लगातार तीन खिल्ली सकिन्। तैपनि मुखबाट केही निस्केन।
‘चुरोट त म पनि खान्छु, तर यस्तो किन? यो त अति भो बा!,' रेखाले आइसब्रेक गर्नैपर्योै।
‘होइन दिदी, आज तपाईंसँग धेरै कुरा गर्नु छ,' हतास मुद्रामा ती अभिनेत्रीले आफ्ना जे–जस्ता कुरा साटिन्, त्यो ‘फेसन' र ‘डर्टी पिक्चर' फिल्मका कथाभन्दा खासै फरक थिएन,' रेखा सम्झन्छिन्। उनलाई लाग्यो, अभिनेत्रीहरुले जेजस्ता आरोप खेप्नुपरिरहेको थियो, त्यसको भुक्तभोगी हुन् तिनी।
रेखाले ती सहकर्मीका अरु अनुभव सुन्न वाइन पिउन अफर गरिन्। तिनले मानिनन्, बरु हार्ड ड्रिंक नै मगाइन्। ‘दिदी, आज म त्यहाँ गएको भए ती गिद्धले मलाई जसरी पनि लुछ्ने थिए। कुन दिनमा यो क्षेत्रमा आइछु, मर्न सक्दिनँ, बाँच्न पनि गाह्रो भो,' बोत्तलसँगै तिनी रेखासामु रित्तिँदै गइन्। तिनको कथा अझै सकिएको थिएन।
लर्बरिएको आवाजमा तिनी सुनाइरहेकी थिइन्, ‘दिदी, अरु त अरु, पत्रकार पनि राति भेट्न बोलाउँछन्, पैसा माग्छन्। तिनीहरुको आर्थिक र शारीरिक शोषण कतिन्जेल सहने?'
‘त्यस्तालाई जुत्तैजुत्ताले हानेर प्रेस–मिट गर्नुपर्दैन त?,' रेखाले बीचैमा उत्तेजित भएर भनेकी थिइन्।
‘त्यति हुति भएको भए किन यसरी रुनुपर्थ्यो र दिदी!'
‘त्यसो भए यो लाइन छाड र बिहे गर,' रेखाले अर्काे सुझाव तेर्स्याइन्।
एउटा ‘चल्ती' की हिरोइनको पीडादायी कथा सुनेर दिक्दार लाग्यो रेखालाई। पीडाले थप गाँज्यो भने अझै दुःखदायी अवस्था सामना गर्नुपर्ला भनेर उनले सुरक्षित अवतरणको बाटो देखाइदिइन् तिनलाई। तर, अहिले एउटा प्रतिभालाई संघर्ष गर्न नसघाएर पलायनको बाटो देखाएकोमा भने पछुतो लागेको छ उनलाई। ‘दिपिकाको कथा सुनिसकेपछि तिनलाई मनोविज्ञको परामर्श लिन नसुझाएकोमा भने ग्लानि महसुस भइरहेको छ,' रेखाले सुनाइन्।
सारा मान्छेका आँखामा रंगिन छ यो दुनियाँ। मनोरञ्जनको दुनियाँ। टिकट काटेर पर्दामा हेर्छन् दर्शक यही दुनियाँ। जसलाई सडकमा निस्कँदा हेर्नेको लाम लाग्छ, हस्ताक्षर लिनेको भिड लाग्छ। जसका रुप र यौवनमा सारा लठ्ठिएका हुन्छन्। रंगिन दुनियाँका तिनै ‘परी' हरु हेर्दा जस्तो देखिन्छन्, यथार्थमा त्यस्ता हुँदैनन्। धेरैका निजी जीवनको रंग फुंग उडेको हुन्छ, खंग्रंग सुकेको वन तुवाँलोले ढाकेजसरी। सारालाई खुसी पार्नेहरुकै खुसी हराएको स्वयं उनीहरु नै पत्तो पाउँदैनन्। सबै छ, तर केही बाँकी नरहेजस्तो।
संसारकी ‘सेक्स सिम्बोल' बनेकी अमेरिकी अभिनेत्री मार्लिन मुनरो हुन् वा भारतीय फिल्ममा धुम मच्चाएकी सिल्क स्मिता, सफलताको गह्रौं भारी सम्हाल्न नसकेरै संसारबाट बिदा भए। बलिउडकै अभिनेत्री जिया खानलाई २५ वर्षको यौवन नै पट्यारलाग्दो भयो र आत्महत्या गरिन्। दिपिकाजस्ती ‘नम्बर वान' को हालत सार्वजनिक भइहाल्यो।
‘बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेको यही हो,' हिरोइनका सबै अवस्थालाई एक वाक्यमा व्याख्या गर्न खोज्छिन्, अभिनेत्री गौरी मल्ल। उनी आफैं पनि हिट–फ्लपको बक्सअफिसमा लामो अनुभव गरेकी अभिनेत्री हुन्। पछि, फिल्मी दुनियाँ छाडेर जापान र अमेरिकामा मजदुरी गर्न गइन्। विभिन्न गसिप र स्क्यान्डलले उनलाई पनि छाडेन त्यतिबेला। आफ्नो कलाले धेरैलाई ‘फिदा' बनाएकी उनी अचेल जीवन जिउने कला सिकाउँछिन् । तर, कलाकारिताका उनकै अनुयायी जिउने कला नजान्दा दुःखी र विक्षिप्त छन्।
‘यस्तो किन हुन्छ त?'
गौरीको खरो अनुभव छ, ‘हामी खालि माथि चढ्न मात्र खोज्छौं। लोभ, मोह, आकांक्षा र लालसाको योगफलले मान्छेलाई सफलताको चुलीमा त पुर्या्उँछ, तर त्यहाँबाट ओर्लनै पर्ने सत्यलाई धेरैजसोले पचाउन सक्दैनन्। चुचुरो छाड्न नचाहनु नै दुःखको कारण हो। यही अवस्था बढ्दै जाँदा डिप्रेसन हुन्छ।'
गौरीको लामो अनुभवले भन्छ, हिरोइन हुनेबित्तिकै जोडिन आउने चिज हुन्, नाम, दाम र प्रशंसा। जसले यी चिज पाउँछन्, तिनलाई यो आदत बनिहाल्छ। आदत अर्थात् नशा। पाएको चिज गुम्न नदिने संघर्षमा डर, चिन्ता र विचलन आउँछ। र, मानसिक रोगको कारक बन्छ।
‘आफूले स्थान पाएपछि यसमा अरूको पनि अधिकार छ, आज म छु, भोलि अर्को आउँछ भन्ने भुल्नुहुँदैन,' उनी भन्छिन्, ‘मैले हिरोइन भइरहनुलाई आफ्नो मात्र पेवा ठानिनँ। सबैलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न सकेकै कारण मलाई कुनै रोग छैन।'
‘तपाईं यति राम्री कसरी हुनुहुन्छ?, कति बेला उठ्नुहुन्छ?, उठ्नेबित्तिकै के खानुहुन्छ? हेल्थ क्लबमा कति घन्टा बिताउनुहुन्छ?' ग्ल्यामर क्षेत्रमा लाग्न खोज्ने नवयौवनाहरु यस्तै जिज्ञासा मेट्न खोज्छन्, अभिनेत्री निशा अधिकारीसँग। निशाको अनुभव छ, ‘यस क्षेत्रका समस्या के के हुन्, संघर्ष कति गर्नुपर्छ, तयारी कसरी गर्ने, कस्ता–कस्ता दुःख आइपर्छन्? यतातिर कसैले जान्न खोज्दैनन्।'
बत्तीको आकर्षणमा बेपर्वाह झुम्मिने पुतलीजसरी ग्ल्यामर क्षेत्रको चमकधमकले तान्छ, नवयौवनालाई। बत्तीमा प्रकाश मात्र होइन, ताप पनि हुन्छ भन्ने नजान्दा जल्ने पुतलीकै जस्तो नियतिको सिकार हुनुमा यस्तै अज्ञानता कारक रहेको औंल्याउँछिन् निशा।
निशा ठान्छिन्, बाहिरबाट हेर्दा यो क्षेत्रमा के के न छ। तर, यो ‘सो–बिज' हो, बाहिर देखिएकै जस्तो छैन। ‘सो बिज' लाई सजिलो ठान्ने, आवश्यक तयारी नगर्ने र ख्याल–ख्यालमा आउनेलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ। निस्कन पनि सक्दैनन्। ‘सर्भाइभ हुनै नसक्ने भए पनि निराशा बढी हाल्छ नि,' देखिने र भोगिने जीवनको फरक नजान्दा र सन्तुलन गर्न नसक्दा समस्या पर्ने बताउँछिन् उनी।
कहिलेकाहीँ उनलाई यस्ता समस्या बढाउन मिडियाको पनि हात छजस्तो लाग्छ। गसिप बनाउने बहानामा निजी जीवनका पत्र केलाएर सताउने मिडियासँग उनको निकै गुनासो छ। ‘नेपाली अभिनेत्री यति सहनशील छन् कि आफ्नाविरुद्ध आउने झुटो समाचारलाई बेवास्ता गरेर हिँड्छन्। तर, सधैँ धैर्य नहुन सक्छ। धैर्य टुट्दा कि मजस्तो छुच्चो भएर ठाउँको ठाउँ मुख खोल्नुपर्छ कि भाग्नुपर्छ,' निशाको अनुभूति छ।
आफू संयुक्त परिवारमा बस्ने हुँदा गलत ‘मिडिया कन्टेन्ट' ले अझ बढी प्रताडित बनाएको उनलाई तीतो अनुभव छ। ‘मेराविरुद्ध आएका समाचारको म त सजिलै सामना गर्छु तर मेरो ममीलाई त्यसले ठूलो असर पुर्याकउँछ। मलाई पनि नभएको कुरा आउँदा झोक चल्छ। त्यसैले आफू पनि बोलेर, लेखेर प्रतिकार गर्छु। नगेटिभ इनर्जी रिलिज गर्दा मन हल्का हुन्छ,' उनी भन्छिन्।
निशालाई लाग्छ, आफूले गर्ने ‘प्रतिकार' को बाटो पनि सही छैन। कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने हो, तर हदै झन्झटिलो। सहेर त कसरी बस्नु? मनमा यस्ता कुरा गुम्स्याउनुको परिणाम उनलाई थाहा छ– कि भडास कि डिप्रेसन। ‘आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्नैपर्छ। चाहे त्यो मिडियाले गरेको होस् या सहकर्मीले। हाम्रा अग्रजले धेरै सहेकाले हामीलाई समस्या परेको छ। हामीले सहे अर्को पुस्तालाई पनि यस्तै समस्या पर्छ,' उनी हट्ने होइन, डट्ने मुडमा छिन्।
भौतिक समृद्धि र अत्याधुनिक जीवनशैली ग्ल्यामर दुनियाँको आवरण हो। तर, यसभित्र हतासा, निराशा, तनाव र छटपटी लुकेको भेउ पाइन्छ, दिपिकाको अनुभूतिबाट।
एकोहोरिने, अनुहार र व्यक्तित्व गिर्दै जाने, निर्णयशक्ति कमजोर हुने, अनिदो रहने, अपच हुने, सम्बन्धहरू खण्डित हुँदै जाने र झिँजो लाग्नेजस्ता लक्षणलाई मनोविज्ञ राजु अधिकारी मनोरोगको संकेत मान्छन्।
योगविज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका उनी एकाग्रता नहुने, काममा रुचि घट्ने, भिड देख्दा भाग्न मन लाग्नेजस्ता थप समस्याबाट जोगिन जीवनशैली परिवर्तन नगरी नहुने सुझाव दिन्छन्।
उनका अनुसार तनाव र दिग्दारी पनि भनिने डिप्रेसन खाने, बस्ने, उठ्ने र सोच्ने तरिका लयबद्ध नहुँदाको असर हो। ‘इच्छाशक्ति जगाएर लक्ष्यकेन्द्रित हुनेभन्दा नतिजाप्रति आशक्ति बढाएर महत्वाकांक्षी हुँदै जाँदा मनोरोगले गाँज्छ,' उनको यो टिप्पणी हिरोइनका जिन्दगीमा धेरै हदसम्म लागू हुन्छ।
‘हो, यहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। धकेलाधकेल छ। हार्नेलाई नजितेको पीर छ, जित्नेलाई टिक्ने तनाव छ। अरूलाई उछिन्ने क्रममा सही, गलत, राम्रो–नराम्रोको वास्तै गरिँदैन,' गौरीको अनुभव भन्छ, ‘फिल्म क्षेत्रमा व्याप्त यिनै कारणले अभिनेत्रीमा डिप्रेसन निम्त्याउँछ।
तनावका यस्ता जड बुझेकै कारण प्रतिस्पर्धाको खेलमा आफू सामेल नभएको उनी दाबी गर्छिन्। आफू कुनै सफलताका पछाडि अन्धो भएर नदौडेकै कारण खुसी रहेको उनको निष्कर्ष छ। ‘साधारण जीवन' का पक्षमा रहेकी उनी यसले जीवनको सन्तुलन नबिगार्ने, मानसिक र शारीरिक रुपमा स्थिर रहन सघाउने बताउँछिन्।
‘कुनै बेला म पनि नेपाली फिल्मको शिखरमा थिएँ। जापानमा वेटर बन्दा त्यो परिचय जिरोमा झर्यो । आफ्नो बलियो मानसिकताकै कारण मलाई त्यो जीवन पनि रमाइलो लाग्यो। जीवन सधैँ एकनास हुँदैन, भोगाइले खास मर्म सिकाउँदै लैजान्छ,' उनी दार्शनिक शैलीमा पोखिन्छिन्।
डिप्रेसन हुनुमा व्यक्तिभन्दा समाजको स्वभाव बढी दोषी देख्छिन् रेखा। जसले धेरै पैसा कमायो, समाज त्यसैलाई सही मान्छ, कारण बुझ्दैन। कतिपयको त अभिभावकले पनि कमाइको ‘तरिका' बुझ्न खोज्दैनन्। उनले जुन हिराइनको कथा नागरिकलाई सुनाएकी थिइन्, ती हिरोइनलाई तनावको त्यो तहमा पुर्यासउन उनकै परिवार जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ। ‘उनको आर्थिक हैसियत एकाएक चुलिएको थियो। कसरी यस्तो भयो परिवारले कहिल्यै सोधेन, चुपचाप उपभोग गरिरह्यो। उनले पनि सुरुमा भन्न चाहिनन्, पछि भन्न सकिनन्,' समस्याको जड यसैलाई मान्छिन् उनी।
कसैले अभिभावकत्व नपाएर त कसैले अभिभावकसँग दुरी बढाएर समस्यामा परेको उनले बुझेकी छन्।
अरू दुःख पाउनु र डिप्रेस्ड हुनुमा धेरै फरक अनुभव गरेकी छन् दिपिकाले। ‘अरू दुख हुँदा आफन्त र साथीहरुको सहयोग पाइन्छ। डिप्रेस्ड भएको सँगै बस्नेले पनि चाल पाउँदैनन्, त्यसैले यो डरलाग्दो अवस्था हो,' दिपिकाले हिस्दुस्तान टाइम्समार्फत बाँडेको यो पंक्तिले आफूलाई राम्ररी छोएको निशा सुनाउँछिन्।
डिप्रेसनको सम्बन्ध व्यक्तिसँग के छ र के छैन भन्ने विषयसँग सरोकार नराख्ने पनि दिपिकाले खुलाएकी छन् त्यहाँ। ‘हिरोइनको शारीरिक फिटनेसको मात्र चर्चा गर्छन्। तर, मानसिक स्वास्थ्य पनि उत्तिकै महत्वको विषय हो,' दिपिकाको यो भनाइमा सही थाप्दै निशा भन्छिन्, ‘हो, म आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यसँग सचेत भएकै कारण प्रत्येक वर्ष ध्यानशिविर जाने गरेको छु। दैनिक मेडिटेसन गर्छु, सकारात्मक सोच्ने प्रयास गर्छु। परोपकारी काममा लाग्दा पैसाले किन्न नमिल्ने शान्ति मिल्छ, त्यतातिर अग्रसर हुन्छु।'
धेरै मान्छे भेट्नुपर्ने, उतारचढाव सामना गर्नुपर्ने एवं पारिवारिक, सामाजिक र निजी जीवनको सन्तुलन राख्न ध्यान अपरिहार्य लाग्छ उनलाई। मनोवैज्ञानिक परामर्शको संस्कृति विकास नभएको समाजमा उनी आफूलाई खुसी राख्न परोपकारी र आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न रहन सल्लाह दिन्छिन्। ‘सबैसँग सबै कुरा साट्न सकिँदैन। यस क्षेत्रमा आएपछि बनेका साथीसँग त सकिँदैन, त्यसैले पुराना साथीसँग सम्बन्ध टाढा नबनाउँ, जोसँग आफ्नो समस्या साटेर हल्का हुन सकियोस्,' उनको परामर्श छ।
सुन्दरी भइरहनुपर्छ, जोवन जान दिनु हुँदैन र सधैँ चर्चामा रहिरहनुपर्छ भन्ने सोच प्रकृतिविपरीत छ। उमेरअनुसारको परिवर्तन स्विकार्नु र सधैँ एकनास देखिने दबाबबाट मुक्त रहनुलाई तनाबको औषधि मान्छिन् रेखा।
‘उमेर बढेपछि मेरो छरितो शरीर भद्दा भयो त के भयो? बिस्तारै गाला चाउरी पर्छ, कपाल फुल्छ त यसमा के चिन्ता मान्नु? फिल्म फ्लप भएर के भो त जीवन फ्लप भएको त हैन नि, सधैँ हिरोइन भइँदैन, त्यसैले फिल्म निर्माण र निर्देशनतिर भूमिका परिवर्तन गरेकी छु। प्राकृतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गरे डिप्रेस्ड भइँदैन,' रेखा भन्छिन्।
हिरोइनहरु मानसिक र शारीरिक रुपमा पीडित छन् भन्ने गौरीले पनि सुनेकी हुन्। कोही पीडित छन् भने त्यसलाई नसहन उनी सुझाउँछिन्। ‘आफ्नो इच्छा पूरा गर्न गलत बाटो हिँडियो भने त्यसमै पछुतो भएर तनाव जन्मिन्छ। साधारण जीवन र सही मार्गले सन्तुष्टि दिन्छ,' उनी भन्छिन्, ‘पुरानाले गरेको गल्ती नयाँले दोहोर्यासउनु हुँदैन। आफूअनुकूल वातावरण आफैंले सिर्जना गर्ने हो।'
नागरिकन्यूज डट कमबाट साभार